Dior Usmanov: izithombe kanye biography
Qamba Alisher Usmanov isikhathi esingaphezu konyaka ezindebeni wonke umuntu, njengoba usomabhizinisi odumile Russian of Uzbek imvelaphi ingenye abantu abacebe hhayi kuphela ezweni lethu, kodwa nasemhlabeni wonke. Isithakazelo nasebuntwini bakhe kudlulela izihlobo. Muva nje, wasebenzisa indlela yamaRoma yokubusa abezindaba Russian ngisho izwe libe khona Dior Usmanov ukuthi Iphephandaba laseBrithani "Daily Mail" ngokuthi "Uzbek Marie Antoinette."
Anti Dior Usmanova - Ziroathon Mahmudovna Hoshimova - umfazi elisanda kuqokwa uMongameli Uzbekistan Shavkat Miromonovicha Mirziyoev.
Umkhulu wakhe - Mahmudjon - nenkathi yamaSoviet kwaholela ukusebenza Supply Division (ODP) Ephakathi Asian w / d Qoqand. Ngaphansi umyalo wakhe letatinyakata izimoto yokudlela, lapho ngaleso sikhathi kwakukhona umthombo engenayo okuningi emthethweni.
uxhaso OPC kusukela Union Centre kanye kwadingeka semininingwane ayo olunzulu ishede. Ngamanye amazwi, Mahmudjon Hoshimov wakwazi ukwaba ukudla kube yindlala futhi emphahleni eza ngqo kusuka State Logistics iKomidi eSoviet Union, futhi wakwenza, yebo, inzuzo bona.
Ngakho, ngumama Dior - Siera Hoshimova - livela lomkhaya ocebile kakhulu futhi ezinethonya.
Njengoba izincwadi kwezinye Abezindaba ukuthi Dior Usmanov - indodakazi UNdunankulu Mirziyoev (okwamanje umongameli we Uzbekistan), it kuwumphumela amaphutha enziwa ngenxa ukufana kwamazwi isibongo sasekhaya wentombi nomyeni wakhe ngasemzini ka-anti wakhe.
Yini ngokuphila 'Princess Dowager' eyaziwa ngaphambi komshado
Dior Usmanov (noma Diyora Mirziyaev) wazalwa ngo-1989, unyaka.
Yena iziqu Tashkent State Institute of Law, bese wathola i-diploma ye-Faculty of Economics of Moscow State University ( "Strategy lwezezimali" okukhethekile).
Lapho ngineminyaka engu-iminyaka engu-17, ubuhle uye yabakhanga indlalifa omunye wemindeni edume kunazo oligarchic Uzbek - Babur Usmanov.
Bobur Usmanov wazalwa ngo-1983. Wayeyindodana mzalwane omncane usomabhizinisi odumile waseRussia. Njengoba-ke kubhekwa ngokusemthethweni ukuthi Alisher Usmanov ayinakho izingane, nomshana wakhe, yena abakhanukelayo, abaningi bazitshela ukuthi yayizoba indlalifa kuyisekazi bhiliyoni. Nokho, lo somabhizinisi umangalele ngokuphindaphindiwe ukuthi ngeke ashiye lutho kunoma ubani. Ngesikhathi esifanayo, naye besekele le Babur futhi wajabula kakhulu nge amkhethayo ezobambisana naye ekuphileni.
Okunethezeka ukugubha senzeka ngonyaka 2009. Naphezu esemncane likamakoti, umshado wayengekho ngesikhathi osithandayo, njengoba intsha kakade wahlangana eminyakeni emibili. Dior Usmanov, obazali bakhe babe kuphela happy kakhulu ukuba ngishade kwelinye imikhaya ezinonileyo ezweni elaliyiSoviet Union, wathatha Babur njengoba nje nendodana bomdabu.
Umshado, lapho kwaba ngempela nesizotha, banikezwe amathuba zezimali emindenini abasanda kushada kwaholela Farrukh Zakirov. Ngaphezu kwalokho, izivakashi efika saseLyme Vajkule noFiliphu Kirkorov. Umakoti kwaba blindingly ezinhle, futhi, ngokuvumelana izivakashi, yena Babur babe umbhangqwana enhle kakhulu.
Dior futhi Babur Usmanov, umshado kabani kwaba esinye sezenzakalo okukhethekile kakhulu kwezenhlalo emlandweni Uzbekistan ezimele, babe umbhangqwana enhle kakhulu.
Ngokushesha ngemva umshado wabo abantu abasha baya Switzerland. Kube Babur matasa isikhundla ebalulekile kwelinye izinkampani eziphethwe ngumalume wakhe.
Dior umkhaya ujabule eyathatha isikhathi eside kakhulu. Ngo-May 2013. Babur Usmanov iphahlazeka ekufeni emotweni yakhe. Le ngozi yenzeke ekuseni eduze Tashkent "Thokoza" esitolo emgwaqeni Navoi. Yakhe "Ford Mustang" ishayisa kocingo. Kuyaziwa ukuthi ikoloyi ngokwayo Bobur Usmanov, owafika izinsuku ezimbalwa ngaphambi umzala lomshado Asal Narziev, kanye gumbi kwaba Christina Yuldashev, naye wafa.
indlalifa Funeral ukuze umbuso omkhulu wezimali owawuse ntambama ngosuku olufanayo e Tashkent, emathuneni Minor.
Ngemva amahemuhemu ukuthi Babur mhla ebuya ephathini ngesikhathi usuku lokuzalwa lomngani futhi waba ukudakwa eqinile oludakayo. Ngaphezu kwalokho, eziningi tabloids, kuhlanganise ngaphandle Uzbekistan, usikhumbula kahle okuxoxwe ungubani umhambi esikanye Usmanov. Ikakhulukazi, bonke nesithakazelo ngalokho ayekwenza ngaleso 5 ezimpondweni ekuseni ukubukeka kwentombazane enhle emotweni yomuntu oshadile.
Dior Usmanov (Photo ukubona. Ngenhla) isikhathi eside ngineminyaka engu lusizi kakhulu. Futhi namhlanje yena ngokuvamile abelana ababhalisile lakhe amanethiwekhi imizwa yezenhlalakahle ngokuntuleka eduze indoda wayemthanda.
Okwamanje, Dior Usmanov ungumnikazi izingubo izingane fashion Boutique BakaJehova eMoscow, okuyinto uthengisa izingubo okunethezeka.
Intengo eyodwa yangasese abameleli abasha kanye nabamele monde Beau ifinyelela 6,000 US dollars, t. E. Alinganayo wemali yonyaka 12-13 izakhamuzi ezivamile Uzbekistan.
Lapho exoxa ne-umagazini waseRussia "Tatler" Dior Usmanov ukuthi umbono ukuvula yezingane esitolo elite sekukhona ngemva kokufa kwendodakazi yakhe kuphela Mariam bakhononda ngokuthi emcimbini wayegqoké ngaphezulu ngesizotha kuka abangane bakhe. Mayelana umzukulu wanquma banakekele ugogo, Siera Hoshimova. Nakuba ukhetha ukuba agqoke kuphela izingubo ezivela Dior, othandiweyo intombazane ngubo yakhe Chic yena bathunga. Wayethanda ukuya nabangane nabantu obajwayele Usmanov umndeni. Yingaleso sikhathi lapho Dior waqaphela ukuthi ukudala izingubo sverhdorogoy ngoba heiresses abasha nezindlalifa oligarchs namafutha kwezicebi - kuba ibhizinisi ethembisa.
Ngakho kwaba khona brand yezingane Bibiona. igama Its livela isidlaliso umndeni Miriam Usmanova, okwakunginika noyise Babur. Abaklami eziyinhloko kakhulu Dior nonina, bese bethunga izingubo abathungi abadumile, owazi ins kanye nasemigwaqweni yokudala zangasese smart.
Nezingubo izingane ezenziwe ngendwangu engokwemvelo. Kulokhu, zonke izakhi okuhlobisa idelayutsya ngesandla. Iqoqo eyokuqala igqoka Bibiona izingane okunethezeka analo ozinikezele abasha tuxedos, ezintathu-piece amasudi jackets ngoba namanenekazi abasha. Ngaphezu kwalokho, kuhlanganisa izesekeli, izicathulo kanye izingubo izinsana.
Dior akufihli ukuphila kwakhe futhi njalo ibika ngemisebenti yayo vakashela ababhalisile zabo Instagram. amarekhodi wakhe Sinesithakazelo esikhulu, futhi ababhalisile Dior phezu 164.000 in amanethiwekhi omphakathi.
Abaningi bakholelwa ukuthi kwaba umfelokazi Bobur Usmanov kuyinto ikhandidethi ezinkulu besifazane isihloko Uzbek inkosazana, okuyinto isikhala savuleka ngemva kokufa Karimov nasemasikweni ukhohlwe namadodakazi akhe.
Muva nje, cindezela libike ukuthi Usmanov Dior washada ngasese. Njengoba kungekho Ukuphika, akukho bufakazi Kuye eshicilelwe, ungakwazi kuphela ukunikeza izibonelo ezisemqoka ukuze asekele emfushane lezi zihloko ngaphandle imibono. Ngakho, izintatheli baphikisa ngokuthi ngo-Ephreli 2016, le etholakala Tashkent Alisher Usmanov wabiza aluminium 'senkosi' Batyr Rakhimov, futhi wammema ukuba ilahle umkayo, ningene emshadweni wesibili ne umfelokazi umshana wakhe. Kusolakala ukuthi bavumelana.
Ngaphezu kwalokho, kwabikwa ukuthi kwakubulawa emhlanganweni obuhanjelwe Shavkat Mirziyoyev, le ke Undunankulu wase-Uzbekistan, owasebenza njengomkhulumeli omele futhi isihlobo Dior Usmanov.
Kungani lo mshado kwakudingeka Usmanov nenhloko Uzbek isimo - umphakathi ukwaziswa. Singagcina ngokubu- ukulinda. Kwangathi ngokushesha isikhathi sihamba siyobona ukuthi kuba duck noma iphephandaba ngempela amandla adingekayo ukuze singene yini umshado onjalo lula walabo noma okunye ukucatshangelwa zezombusazwe.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini namuhla ukwenza Dior Usmanov. Biography of ubuhle Uzbek edonsela isithakazelo njalo bonke labo bayathanda ukulandela ukuphila we "abacebile nosaziwayo." Ake bathemba ukuthi ukuphila kwakhe kwesikhathi esizayo kuyoba izinto ezizwisa ubuhlungu kungeke kusaba khona, futhi kuyohlale kunje ukujabulela impumelelo inkosazana yakhe kancane Mariam.
Amapharamitha showman: ukukhula Garik Martirosyan
Alona Alohina, ibhodi lokusheleleza eqhweni Russian: Biography, empilweni yakho, ezemidlalo impumelelo
Lebedev leonid Leonidovich: Life futhi Umsebenzi
Kuzmina Marina: Biography, empilweni yakho
Legend of Grimrock 2: ukuhamba, umlingo, amathiphu, amakhodi
Amathuluzi angenamgcobo wokwakhiwa kwanamuhla
Indlela yokwakha server yakho siqu
Adriano Celentano. Biography umlingisi brilliant
Ungakwenza kanjani ukuchitha iholide lakho? Cherepovets nokungcebeleka
Kuyini ulwelwesi okwesikhathi okugeza kungcono: umbono ukuqhathanisa, izici kanye nokubuyekeza
Izimpawu kanye nokwelashwa balanitis
Analog "Derinat" ezishibhile. "Derinat": analogue kushibhile izingane (uhlu)
Bangaki carbohydrate udinga ngosuku umuntu
Izizathu yokungenzi noma indlela yokunqoba ubuvila.